38 Email Khaladaadka Suuqgeynta si aad u hubiso Kahor intaadan gujin dir. Martech Zone
Waxaa jira khaladaad badan oo badan oo aad ku sameyn karto dhammaan barnaamijka suuq geynta emaylka this laakiin tan infographic oo ka socda Suugaanta Emailka wuxuu diiradda saarayaa khaladaadkaas khaldan ee aan sameyno ka hor intaadan gujin dir. Waxaad ku arki doontaa wax yar oo ka mid ah wada-hawlgalayaashayada 250ok ku saabsan naqshadaynta iyo waxqabadka samatabbixinta. Aynu ku boodno midig:
Kahor inta aynaan bilaabin, ma waxaa nalooga dhigay guuldarro ama guul? Kafaala qaadayna at 250ok leeyihiin xalka cajiibka ah oo kaa caawin kara inaad la socoto ku dhawaad ​​arrin kasta oo la xiriirta sumcadda emaylka, gaarsiinta, iyo meelaynta sanduuqa.
IP-ga oo loo yaqaan 'IP' - Ha u oggolaan in wax-soo-saarkaaga uu ku baabi'iyo dirista xun isla shabakadda IP ee adeegga emaylkaaga.
Meelaynta Sanduuqa - isticmaal xalka kormeerka sanduuqa si aad u xaqiijiso emaylladaada in aan loo geynin galka qashinka oo keliya, waxay sameynayaan sanduuqa.
Bixinta - ha uga tagin adeegga emaylka wanaagsan mid xun oo ha baabi'in soo-gaadhistaada.
Liiska madow - hubi in cinwaankaaga IP uusan ku jirin liiska diraha madow, haddii kale waxaa laga yaabaa inaad hesho liidasho liidata ama meelaynta sanduuqa.
Domain - ka soo dir oo ilaali cinwaanka emaylka wanaagsan si aad u dhisi karto sumcaddaada (oo ay weheliso IP-gaaga).
SPF - Qaabdhismeedka Qaabdhismeedka Siyaasadda Sender waa waajib sidaa darteed ISPs way awoodi karaan ISPs waa xaqiijin karaan oo waxay heli doonaan emaylladaada.
DKIM - DomainKeys Aqoonsiga Boosta waxay u oggolaanaysaa urur inuu qaado mas'uuliyadda farriinta sii socota.
DMRC - DMRC waa qaabka ugu dambeeya ee aqoonsiga si loo siiyo ISPs aaladaha ay u baahan yihiin si ay emailkaaga ugu sii dhaafaan.
Loops Jawaab - hubi inaad hayso jawaab celin la hirgaliyay si macluumaadka ISP loogu soo wargaliyo ESP-kaaga si loo hagaajiyo gudbinta emaylka.
Maareynta macaamiishu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah barnaamijka suuqgeynta iimaylka caafimaadka qaba.
Ogolaashaha - ha isku mashquulin naftaada ISPs. Weydiiso ogolaansho inaad email u dirto.
Waxa aad rabtid - Bixi oo dejiso waxyaabaha laga filayo inta jeer ee macaamiishaada.
Waxqabadka - ka saar macmiisha aan firfircooneyn si loo yareeyo cabashooyinka aan la bixin iyo ka-hawlgal la'aanta.
Frequency - ha kor u qaadin soo noqnoqoshada si aad u sarreysa oo ay macaamiishaadu ka baxaan.
Kala-goynta - Miyaad laba jeer hubisay tirinta iyo saxnaanta qaybtaada?
Tani waa halka ay lacagtu taalo laakiin shirkado badan ayaa sameeya khaladaad khaldan oo maaddooyin leh.
Khadadka maadada caajis - hadaad rabto qof inuu furo, usheeg sabab! Baadhid Khadka Tooska ah ee Generator-ka Ololaha caawimaad.
Cadeyn - Miyaad u aqrisay qoraalkaaga naxwaha iyo higgaadinta? Sidee ku saabsan codka codka?
CTA-yada adag - Samee Wicitaanadaada-Waxqabadka ka dhex muuqanayso mobilada ama miiska desktop-ka!
FNAME - haddii aadan magacyo u lahayn dhammaan macaamiishaada, ha la hadlin! Ama u adeegso macquul.
Isku duubnaan Goobaha - tijaabi dhammaan xogtaada ka hor intaadan dirin haddii kale khariidado iyo waxyaabo firfircoon ayaa kaa dhigaya adiga.
soo jeeda - Imtixaan ka soo qaad dhammaan macaamiisha emaylka… badankood ma isticmaalaan.
Badhamada - u isticmaal sawirrada badhanno si ay badhamadaadu ugu wada muuqdaan dhammaan macaamiisha emaylka.
caalami - miyaad isticmaaleysaa dejinta saxda ah iyo astaamaha macaamiishaada?
farshaxan - uga faa'iideysii farriimaha gadaal u-dhaca aaladaha iyo macaamiisha aan iyaga taageerin.
Bulshada - miyaad leedahay xiriiriyeyaal akoonnadaada warbaahinta bulshada si dadku u saaxiibtin karaan oo ula socdaan?
Kafaala qaadayna at 250ok Hayso ikhtiyaar horudhac ah oo aad ku eegi karto emaylkaaga dhammaan macaamiisha emaylka waaweyn.
Nabar yar - tijaabi emaylka si aad u aragto khadadkaaga ugu horreeya ee ku saabsan horudhaca emaylka waa ku khasab
Alt - uga faa'iideyso qoraal kale oo ku kalifaya sawir kasta.
imtixaanka - tijaabinta khadadka mawduuca, xiriiriyeyaasha, CTAs, shaqsiyankaiton, xaqiijinta iyo kala duwanaanshaha.
Diiwaangelinta - farta yar yar iyo Unsubscribes madmadow ayaa iga dhigaya inaan waligay kula ganacsan.
Xaragada - ku dar heshiisyo muddo dheer, emayllo qaybsan si aad ugu ekaato moobiil weyn.
isha - u adeegso sawirro xallinta sare leh oo loogu talagalay qaababka muuqaalka isha ee aaladaha casriga ah ee Apple isticmaalaan.
Tixgelinta - hubi in iimaylkaagu u muuqdo mid ku fiican qalabka moobiilka iyo kaniiniga. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ku darto dhar xiran, ugu dhakhsaha badan!
Jeegag U dir Email
Farsamaynta emaylka iyo sida ay u shaqayso markay gaadho sanduuqaaga macmiilka ayaa saameyn ku yeelan kara kalsoonidaada iyo sidoo kale gujiskaaga iyo heerarka beddelaadda.
Laga soo bilaabo Cinwaanka - isticmaal 'Cinwaanka Cinwaanka' ee la aqoonsan karo
Jawaab Ku Soo hagaaji - maxaa loo isticmaalaa noreply @ marka ay jiraan fursado lagu xiriiro oo wax lagu iibiyo?
Kicinta Caqli ahaan - hubi in ololahaaga faleebada loo fuliyay si macquul ah.
Links - Miyaad tijaabisay dhammaan xiriidhada emaylka ka hor intaadan u dirin dhammaan macaamiisha?
Goobaha Bogagga - dhiso bogag degitaan sare leh foomam yar.
Warbixinta - qabashada stats, falanqee iyaga, iyo hagaajinta dadaalka suuqgeynta emailkaaga.
Compliance - ma haysaa dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka u ah u hoggaansamida sharciga oo buuxa lugtaada?
[sanduuqa nooca = ”soo dejinta” align = ”aligncenter” class = ”” width = ”90%”] Soo dejiso Ehelada Emailka 'Dib u eegista degdegga ah liiska hubinta waxyaabaha la fiirinayo ka hor intaadan dirin. Waa wax yar oo PDF ah! [/ Sanduuqa]
Tags: dkimDMRCDomainKeys Aqoonsiga Boostaku qor emailkataariikhda emaylkabadhannada emaylkaiimayl u dir CTAsfarriimaha emaylkainta jeer ee emaylkaemail caalami ahemaylka isku darsamaogolaansho emaylcinwaanka iimaylkakhadadka mawduuca emaylkaemayl xadhkaha bedelkaimtixaanka emaylkafarriinta qoraalka emailkaiimaylka ka noqoFNAMEImagemacaamiisha aan firfircooneynfasaxjawaabretinaCiidanka Booliiska SoomaaliyeedCTAs adagrukhsadda rukunkadoorbidida macmiilkaxargaha beddelashada
Si buuxda ugu raacsanahay khaladaadkan suuqgeynta emailka.
Waxaan sidoo kale dareemayaa in kuwani ay yihiin khaladaadka ugu caansan ee badankood kuwa sameeya emaillada ay sameeyaan. U dirista emaylka maaddo caajis ah waa qalad aad u badan.
Marnaba ma furo email kasta oo indhahayga soo jiidan karin. Had iyo jeer waan iska indhatiraa ama tirtiraa emaylka noocan oo kale ah isla markiiba.
Suuqgeyaasha emailka waa inay fahmaan in qofna uusan rabin inuu waqtigiisa ku lumiyo akhrinta emayllada caajiska ah. Haddii aad runtii rabto inaad beddesho markaa waa inaad dirtaa emayl iyadoo leh indho qabasho, soo jiidasho iyo qaddarin mawduuc leh. Sababtoo ah waa khadka kaliya ee akhristayaashu akhriyaan marka hore.
Marka daryeelkeeda waxay hagaajin kartaa xirfadahaaga.
Waan ku faraxsanahay inaad halkan ku qortay dhammaan khaladaadka suuqgeynta e-mayl ee waaweyn si aan u baranno ugana fogaanno. Waad ku mahadsantahay inaad nala wadaagto. 😀